Sawirro: La degaallanka cudurrada Soomaaliya - BBC Somali
Sawirro: La degaallanka cudurrada Soomaaliya
7 Nofembar 2013
La degaallanka cudurrada Soomaaliya
Hooyooyin sugaya in carruurtooda la tallaalo, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka laga heli karo carruurta ugu badan ee aan tallaal helin.
Baaritaan ay samaysay hay'adda UNICEF ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 7 carruurta Puntland iyo boqolkiiba 11 kuwa Somaliland oo kaliye ay helaan dhamaan tallaalka loo baahan yahay.
Aabe wiilkiisa isbitaal keenay. Carruur kor u dhaafaysa 22 milyan oo dunida ku nool ayaan helin tallaalka ay u baahan yihiin.
Ciidammada Soomaalida oo ilaalo ka hayo meel u dhow aqalka madaxtooyada. Dagaal sokeeye oo socday muddo 20 sano ka badan ayaa daciif ka dhigay waaxda caafimaadka ee dalka.
Hooyooyinka Soomaalida qaarkood ayaa dadaal ugu jiro in carruurtooda ay ka badbaadiyaan cudurrada. Dhibaatada Soomaaliya ka jirto waxaa ka mid ah in waalidiinta aanay garanayn muhimmada tallaalku u leeyahay caafimaadka carruurta.